७५ केजी पुगेकी रेजिना उप्रेती कसरी घटिन् ? « Ramailo छ
७५ केजी पुगेकी रेजिना उप्रेती कसरी घटिन् ?
नायिका रेजिना उप्रेती १८ महिनाकी छोरी आमा हुन् । तरपनि रेजिना शारीरिक रुपमा फिट छिन् । रेजिना कसरी छिन् त यति फिट ? यो रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
रेजिनाको भनाई अनुसार गर्भवती हुँदा उनी ७५ केजीसम्म पुगेकी थिइन् । ‘अहिले ५०-५२ केजी छु होला’, उनले आफ्नो हालको तौल खुलाइन्, ‘एक्सरसाइज गर्न थालेको त भर्खर एक महिना हुन थाल्यो । उसो भए कसरी दुब्लाइन त रेजिना ? ‘खानपिनमा ध्यान दिएँ । अरु त केही पनि गरिन, रेजिना भन्छिन् ।
ज्यान घटाएर स्लिम बनेकी रेजिना के फिल्म खेल्दैछिन्, ‘अझै केही वर्ष फिल्म गर्दिंन’, रेजिनाले भनिन् । छोरी हुर्किएपछि मात्रै फिल्ममा फर्किने उनको योजना छ । दर्जन बढी फिल्ममा अभिनय र ‘वरदान’ नामक फिल्म समेत बनाएकी रेजिनको फिल्मप्रति त्यति प्यास पनि छै रे ।
‘छोरी स्याहार्न र घरकै काममा व्यस्त हुन्छु । आफ्नै काममा विजी हुने भएकाले फिल्म लाइनलाई त्यस्तो मिस पनि गर्दिन’, रेजिनाको भनाई छ । फिल्ममा कहिले फर्किएलिन् त रेजिना ?